सम्बन्ध विच्छेद किन हुन्छ ?
साथीलाई विश्वासघात गर्दै उसको पत्निसँग सम्बन्ध बनाउने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय ? शास्त्रमा के छ
एजेन्सी । शास्त्रका अनुसार, मानिस पृथ्वीमा रहँदा जे पनि कर्म गर्दछन्, चाहे राम्रो काम होस् या नराम्रो सबैको लेखा–जोखा मानिसको मृत्यु पछि हुने गर्दछ । त्यस कर्मको फल पुनर्जन्ममा भोग्नुपर्छ ।
प्रेमीकाको सामु यस्ता गल्ती गर्दै नगर्नुहोस्
एजेन्सी । सायद कमै युवकलाई थाहा छ कि युवतीको एक नजर र अनुभवले कुन युवक कस्तो छ जानिहाल्छन् । उनीहरुले पहिला नै सोचिसकेका हुन्छन् कि यो युवकसँग सम्बन्ध बनाउने कि नबनाउने ।
अजबगजबको यात्रा: उल्टो कदमले ८०० किमी यात्रामा निस्किएपछि...
एजेन्सी । इन्डोनेसियाको पूर्व जावाको गाउँ डोनोंबाट राजधानी जकार्ताको दुरी ८०० किलोमिटरको रहेको छ । यस दुरीमा यात्रा गर्न गाडीलाई कम से कम १० घण्टा लाग्छ ।